Ny Fanomanana ho Diakona – FJKM
Madiva hifarana ny taom-piasan’ireo tomponandraikitra rehetra any anivon’ny Fitandremana, satria ny taona alohan’ny Synoda lehibe no amaranany ny asany, izay naharitra efatra taona. Amin’io taona hoavy io, 2019, no ho taom-panavaozana, ka isan’izay tsy maintsy havaozina amin’izany ny Diakona, isa-pitandremana.
Ny diakona dia iray amin’izay mandrafitra ny antsoina hoe: Mpiara-mivavaka sady vahoakan’Andriamanitra rahateo (Fotodalàna sy Fitsipika – FDF- toko faharoa), Mpandray ny Fanasan’ny Tompo, izay voasoratra anarana ao anatin’ny Fitandremana ka fidian’ireo Mpandray ny Fanasan’ny Tompo namany ho Diakona. Hifanaraka amin’ny isan’ny Mpandray ny isan’izy ireo amin’izany.
Fanompoana manokana no tanterahin’izy ireo eo anivon’ny fitandremana ka andraisany fanofanana ho fanomanana azy ireo amin’ny ny andraikiny. Ny FDF andininy faha 127, 128, 129 no mamaritra ny fiofanana tokony ho raisiny.
Haharitra telo volana io fiofanana io raha kely indrindra, izay tanterahina mialoha ny handraisan-tanana na anokanana azy ho Diakona (FDF And. 127) Tanterahina isan-kerinandro ny fanomanana amin’izany (and. 128).
Araka izany, na dia azo atao tsara aza ny manefa ny fanofanana ao anatin’ny ora maromaro, indray na indroa andro, eny na azo atao koa aza ny manoratra ny fanofanana ilain’ny Diakona ka hiofanany any an-trano dia tsy azo atao izany. Azo heverina mantsy fa efa fanomanana azy hiatrehany ny adidiny isan-kerinandro ny fanofanana azy isan-kerinandro. Farafahakeliny dia ho isan’alahady no hanao ny asany ny Diakona iray ka tsy maintsy omanina ho amin’izany izy. Koa nahoana ary no ahitana na andrenesana fa misy Diakona tsy tonga miangona raha tsy amin’ny fotoana anatanterahana ny anjara raharahany? Azo amaliana izany ny hoe: satria tsy takany ny hevitra ao ambadiky ny fiofanana isan-kerinandro.
Lohahevitra Valo no atolotra ny Diakona mandritr’io fotoam-piomanany io dia ireto avy, araka ny FDF and. 129 hoe: “Izao no fandaharan-desona ampianarina ireo miomana ho Diakona :
Fahalalana sy heviteny tsotra momba ny Soratra Masina : Testamenta Taloha sy Testamenta Vaovao,
Fahalalana ny fotopinoana kristiana,
Ny maha-izy azy ny Fiangonana : ny fitondrana sy ny fandaminana,
Ny Fotodalàna sy Fitsipiky ny FJKM,
Ny Asa Misiona sy ny Asa Fitoriana ny Filazantsara,
Ny adidin’ny Diakona, ny toetra tsara ilaina hananany,
Ny Fanekena fito”.
Raha ireo fandaharan-desona ireo no enti-mamaritra ny antsoina hoe: diakona dia izao no izy:
Ny Diakona dia ho olon’ny Tenin’Andriamanitra. Fantany ny hevitry ny Soratra Masina izay vakiany ka ho tonga fiainany ny fahafantarany ny fahamarinan’izay vakiany.
Ny Diakona dia ho olona miorina tsara amin’ny maha Kristiana azy. Tsy ny Diakona mihitsy no hanao tan-droa amin’ny finoana ka sady hanaiky ny herin’ny maizina no hankato ny herin’Andriamanitra avo indrindra.
Ny Diakona dia ho olona manaiky sy miasa eo ambany rindran-damina sy rindram-pitondrana mazava, fa tsy sanatria manao izay tiany hatao. Amin’izany, ny Fotodalana sy fitsipika no toy ny arofanina mamerina azy tsy ho latsaka any amin’ny tsy fanoavana.
Ny Diakona dia ho Misionera (Iraka mpanao ny asan’Andriamanitra) no Mpitory ny Vaovao mahafaly dia ny famonjen’i Jesoa Kristy amin’ny Mpiara-belona aminy ka hiainga ao amin’ny Fiangonana nahavoafidy azy izany.
Ny Diakona dia ho olon’ny firaisam-piangonana, miainga avy ao amin’ny fiangonany ka miitatra hatrany amin’ireo Fiangonana Kristiana hafa manodidina azy.
Ny Diakona dia olona mandray andraikitra amin’ireo adidin’ny fiangonana ka maneho izany amin’ny toetra tsara ananany hatrany anivon’ny Fiarahamonina misy azy any.
Ny Diakona dia olona manana an’Andriamanitra ho Andriamaniny ary manaiky fa izy dia olon’Andriamanitra.
Koa eto am-pamaranana, ry Diakona o! Samia manavao ny fanoloran-tenany.
Jona: MIHAVANA AO AMIN'NY TOMPO
| | 07. Ala.Trinite
Sal133.1-3/ Jao 13.34-35/ Rom 13.8-10
| | 14. Ala.I man Trin-SEKOLY FJKM
Lev 19.16-18/ Mar 9.33-50/ Fil 2.1-4